Zvinokosha zvakaisvonaka uye yakakodzera inotakurika firiji, kubuda kunwa doro inotonhora hakusi kurota!
Kazhinji, kana uchida kunwa doro chando uye chinwiwa pose waunobuda, nyore chitoro mumugwagwa ndiyo yakanakisisa sarudzo. Nzira nyore vanakidzwe Cold zvinobata apo musasa kunze, mugungwa kana mugwenga ndiko kuvimba nemotokari firiji. Paaiva-motokari fridges rinogona kuzorodza, zvinwiwa inotonhora chero nguva, asi marapirwo iri pachena.
Chokutanga, dzisina kukwanisa; Chechipiri, vakawanda pamusoro-bhodhi sefiriji vari kuparara. Zviri nyore kuti kukutevera mhiri makomo uye nzizi uye pakupedzisira zvinopa inotonhorera uye muchitonhorera zvinwiwa.
Hakuna mhinduro? Nature haisi!
Portable duku firiji ndiyo wemagetsi Refrigeration midziyo pamwe tembiricha murau chaitika. In akangwara rudzi, tembiricha muchoto kuramba pakati 2 ~ 8 ℃. In kuisa nzira, tembiricha mukati bhokisi anogona kumisa zvemasanga tembiricha pakati 2 ~ 25 ℃.
Portable duku firiji ane zvakasiyana siyana simba wedzerai muoti (imba mabhatiri, motokari simba wedzerai, lithium bhatiri), hunyambiri tembiricha kudzora nyika akangwara Settings, User Settings, hunyambiri LCD Mabudiro tembiricha uye chaiyo nguva tembiricha, Celsius, kuchipfuura tembiricha kaviri hurongwa anogona kuva zvemasanga kusanduka, zvakakodzera kuti siyana ezvinhu, ndiwo akanakisisa sarudzo kuti vatengi pamba.
Tarirai kubva chigadzirwa, asi rakakamurwa yakagwamba nechando uye refrigerated nzvimbo, achiri anogona kushandisa kombiyuta bhodhi kudzora tembiricha zvakarurama, shandisa nyore chaizvo. Asi zvinonyatsorehwa nemamiriro motokari mufiriji uye vanhuwo firiji harisi chete. Motokari-akatasva firiji Refrigeration ANOSHANDISA semiconductor michina, Refrigeration vanokwanisa idukusa tsika firiji, asi bhuku iri diki, nyore kutakura, zvakakodzera chaizvo kuti dzakananga nevatengi nemapoka kushandisa.
Post nguva: Aug-29-2018